आफूलाई भेट्न आएकी महिलाको नेइमारद्वारा बलात्कार, आफैले स्वीकारे आरोप « The News Nepal
आफूलाई भेट्न आएकी महिलाको नेइमारद्वारा बलात्कार, आफैले स्वीकारे आरोप
ब्राजिलका चर्चित फुटबल खेलाडी नेइमारले प्यारिसमा आफूले एक महिलाको बलात्कार गरेको भन्ने आरोप सशक्त रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।
प्रहरीका अनुसार साओ पाउलोमा दायर गरिएको उजुरीमा एक महिलाले प्यारिसस्थित एउटा होटलमा सो घटना भएको उल्लेख गरेकी छन्। नेइमार फुटबल क्लब प्यारिस साँ-जमाँ (पीएसजी) का लागि खेल्छन्।
नेइमारको व्यवस्थापनले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आरोपलाई “पूर्ण रूपमा अस्वीकार” गरेको जनाएको छ। नेइमार अहिले कोपा अमेरिकाका लागि ब्राजिलमा राष्ट्रिय टोलीसँग प्रशिक्षण गर्दैछन्।
आरोप के छन्?
प्रहरीको दस्तावेजअनुसार नाम नखुलाइएकी ती महिला र नेइमारबीच सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममार्फत्‌ चिनचान भएको थियो र नेइमारले प्यारिसमा उनलाई भेट्न बोलाएका थिए। ती महिलालाई ब्राजिलबाट फ्रान्सका लागि उनले हवाई टिकट उपलब्ध गराएका थिए भने प्यारिसस्थित एउटा होटलमा कोठा पनि लिइदिएका थिए।
गत मे महिनाको १५ तारिखमा नेइमार होटल आइपुग्दा उनले मदिरा सेवन गरेको “स्पष्ट रूपमा” देखिएको ती महिलाको आरोप छ। कुराकानी र अङ्कमालपछि नेइमार “आक्रामक भए र हिंसात्मक रूपमा पीडितको इच्छाविपरीत शारीरिक सम्बन्धमा सक्रिय भए”, प्रहरीको दस्तावेजमा भनिएको छ।
घटनाबारे फ्रान्सेली प्रहरीमा कुनै उजुरी नै नगरी त्यसको दुई दिनपछि ती महिला ब्राजिल फर्किइन् किनकि “उनी भावानात्मक रूपमा विचलित भएकी थिइन् र परदेशमा उजुरी गर्न डराएकी थिइन्,” प्रहरीको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
नेमारका बुवा के भन्छन्?
आरोपहरू सार्वजनिक भएपछि जारी गरिएको एउटा विज्ञप्तिमा नेइमारको व्यवस्थापनपक्षले भनेको छ, “हामी अन्यायपूर्ण आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छौँ।”
नेइमारका बुवा नेइमार डस सान्तोसले शनिवार ब्राजिलको ब्यान्ड टीभीसँग कुरा गर्दै “त्यो एउटा जालसाजी भएको स्पष्ट छ” भनेका छन्। “यदि सर्वसाधारणलाई सत्यतथ्य बुझाइएन भने यो कुरा फैलिँदै जान्छ। ह्वाट्सएपमा नेइमार र ती महिलाबीच भएका कुराकानी देखाउनुपर्छ भने हामी देखाउँछौँ,” उनले थपे।
के नेइमार कोपा अमेरिकाका लागि तयार छन्?
अनुशासनसम्बन्धी पछिल्ला मुद्दाका कारण अग्रपङ्क्तिका २७ वर्षीय यी खेलाडीलाई कप्तानको भूमिकाबाट हटाइएको छ। गत महिना कप डे फ्रान्समा पीएसजी ‘रेन’ बाट पराजित भएपछि एक प्रशंसकलाई हिर्काएका कारण फ्रान्सेली फुटबल अधिकारीहरूले नेइमारमाथि तीनवटा म्याचमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।